‘प्रदेशमा डेंगु फैलियो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’::Nepal's Digital Newspaper
‘प्रदेशमा डेंगु फैलियो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’
प्रदेश ३ मा डेंगुको संक्रमण बढ्दो छ। प्रदेश तथा संघीय सरकारले डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो छ। प्रदेश सरकारले डेंगु संक्रमित बिरामीको उपचार तथा यसलाई नियन्त्रण गर्न के–कस्ता काम गरिरहेको छरु प्रदेश ३ सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालसँग गरिएको कुराकानीको सारः
प्रदेश ३ मा डेंगुको अवस्था कस्तो छ ?
यतिले मात्रै डेंगु नियन्त्रण सम्भव छ त ?
अहिले भैरहेका क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनेछौं। साथै नयाँ अभियान सञ्चालन गर्दै जाने योजना छ। प्रदेश सरकारले डेंगु नियन्त्रणकै लागि पाँचेहप्ते प्रादेशिक अभियान सुरु गर्दैछ। यो अभियान शनिबारदेखि सुरु हुनेछ।
शनिबार प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एकै समयमा यो अभियान सुरु हुनेछ। यसअन्तर्गत सबै जिल्लामा सम्पूर्ण जनसमुदायलाई ‘सबै जागौं, सबै लागौ‌, वरिपरि जमेको पानी हटाई डेंगु भगाऔं’भन्ने मूल नारासाथ हातेमालोका लागि आह्वान गर्ने कार्यक्रम छ। यो अभियानमा सबैले आफ्नो घर, कार्यालय, पसल, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था आदिबाट बासस्थानको कम्तीमा सय मिटर दूरीमा जमेका पानी हटाउनेछन्।
हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका डेंगुका बिरामीलाई के गरिरहनु भएको छरु डेंगु परीक्षण किटसमेत नपाएको गुनासो छ ?
डाक्टरले लक्षणको आधारमा डेंगु हुँदै हैन भन्दाभन्दै किन परीक्षण गर्नुरु परीक्षण गर्न किट भएन भनेर अनावश्यक प्रचार गर्नु जरुरी छैन। किट उपलब्ध छ र, नियमित पनि हुनेछ।
अन्तमा डेंगु नियन्त्रण अभियानबारे के भन्न चाहन हुन्छ ?
प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी चितवन, त्यसपछि मकवानपुर र काठमाडौंमा यसको समस्या छ। सरकारले योजना बनाएर, नीति बनाएर मात्रै रोग निदान तथा रोकथाम हुँदैन। जनता स्वयं लाग्नु जरुरी छ। पाइरेथिन नामक केमिकल छरेर मात्रै यो नियन्त्रण हुँदैन।
दोस्रो कुरा, जो डेंगुप्रभावित भैसक्नु भएको छ, नआत्तिकन मस्त आराम गर्ने, झोलिलो पदार्थ खाने गर्नुपर्छ। यो रोगको उपचार होइन, रोकथाम मात्रै सम्भव छ। यसो हुनाले रोकथामकै लागि प्रादेशिक अभियानमा लाग्नु जरुरी छ। आफ्नो घरआँगन सफासुग्घर राख्ने, कतै पनि पानी जम्नै नदिने अनि पूरा बाहुला भएको लुगा लगाउनेजस्ता रोकथामका उपाय अपनाउनुपर्छ। (सरिता दाहाल/नेपालन्युज)